Apple inogadziridza iyo MFi chirongwa che USB-C kusvika 3,5mm Jack adapters | IPhone nhau
Apple inogadziridza iyo MFi chirongwa che USB-C kusvika 3,5mm Jack adapta
Iyo gakava yakapihwa nekuuya kweiyo iPhone 7 apo Apple yakasarudza kubvisa 3,5 Jack chinongedzo nechirova chimwe chepeni mamirimita kubva kunharembozha yavo. Kufamba kwekuda kuziva kana isu tichifunga kuti rudzi urwu rwekubatanidza rwuchiri rwunonyanya kushandiswa mumusika nhasi, chimwe chinhu chakagadziriswa neImagetsi adapter - 3,5mm Jack.
Nekudaro, izvi zvinogona zvakare kuve zvinonakidza zvemidziyo iyo inosanganisira chete USB-C zviteshi. Iyo Cupertino kambani yakafungawo nezvavo, uye ndizvozvo Iyo MFi certification mutemo weMheni kana USB-C adapta kune 3,5mm Jack yachinja.
Sezvaunenge uchitoziva, Zvigadzirwa zveMFi ndezve iyo iyo Cupertino kambani Iyo yakasimbiswa nekuti ivo vane mhando uye optimization zviyero zvinovimbisa kwavo chaiko kushanda neIOS zvigadzirwa. Ndicho chisimbiso chevimbiso yekuti chishongedzo chatiri kutenga chinopa mashandiro akanaka uye hachizounze matambudziko ekuenderana, sezvazvinowanzoitika netambo dzisingazivikanwe kana dzakaderera zvakanyanya tambo dzemheni. Iye zvino Apple yasarudza kusanganisira kuchinjana kwedata uye kubhadharisa zvinowirirana zvizere neExtis Mheni mune zvigadzirwa zveUS-C, ndiko kuti, tichaona maadapter kubva kune mamwe mabhureki asiri Apple munguva pfupi.
Uyewo, iyo Mheni yekubatanidza ikozvino inopa mukana wekushandisa odhiyo kuburitsa mu stereo nekutenda kune 3,5 mm jack magumo. Ndokunge, mhando yemhando ine tambo iyo kune imwe mugumo yakaiswa muiyo iPhone uye kune imwe tinokwanisa kubatanidza chero mahedhifoni, senge iyo adapta iyo inosanganisira iyo iPhone. Izvi zvinobatana nekuvandudzwa kwazvino kweM logo marogo atakakuudza nezvazvo nezuro. Zvishoma nezvishoma Apple iri kuvhura kumamwe misika inoita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inogadziridza iyo MFi chirongwa che USB-C kusvika 3,5mm Jack adapta
Kubva pa iPhone 7 kuenda kuX X inosanganisira mahedhifoni ane Mheni chiteshi
Ndinokutendai zvikuru, yakanga iri kukanganisa kwangu!
Ini ndinofunga kuti kana vakabvisa Mini-Jack vanowana nzvimbo mumusangano wekupedzisira, asi kuti havagadziri maadapter akawanda, kuti vagadzire muyero kana kuti mamwe makambani ekuteerera anogonawo kutora mahedhifoni ane mheni yekubatana.
Miguel, ini handizive kuti ndedzipi iPhones 7 kusvika X dzawaona, asi kubva pa7 Earpods dzavanosanganisira ndeavo vane Mheni yekubatanidza ...
Chiuru chekuregererwa kwekudzora kwepfungwa, ini handina kufemerwa!
Apple inova inodakadza mhando yemireniyamu